Gold Flakes Supreme ဟု အမည်ပေးထားသော ရွှေမှုန်ကလေးများ ပါဝင်သည့် ယမကာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၀.၇၅ လီတာပါဝင်သော တစ်ပုလင်းကို ဒေါ်လာ၆၀ ကျသင့်သည်။
ဆွစ်ဇာလန် သကြားလုံး စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော တစ်လုံးလျှင် ၂၉ ဒေါ်လာတန် ရွှေပြားလွှာဖုံးအုပ်ထားသည့် သကြားလုံး ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ပုလင်းကို ဒေါ်လာ ၆၀တန် hot sauce ပုလင်း
ဝ.၇၂ လီတာ တစ်ပုလင်းကို ဒေါ်လာ၃၀တန် ဂျပန်ဆာကေး
အင်္ဂလန်ရှိ စက်ရုံတစ်ခုတွင် ၁၂၅နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ပွဲ ကျင်းပချိန်တွင် အလွန်ဈေးကြီးသော ယိုတစ်မျိုးကို အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းယိုတွင် ရွှေမှုန်အစစ်များ ပါဝင်ပြီး ရောင်းချရန်မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေရောင်ဆေးခြယ်ပြီးလည်း အသီးတွေကို လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသည်။
Frrozen Haute Chocolate Sundae
ရွှေမှုန်များပါဝင်သော လော်လီပေါ့ပ် နှင့် ရွှေချထားသည့် ဈေးအကြီးဆုံး စီးကရက်
သင်သာဆိုလျှင်ရော ငွေကြေးချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူတစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့လျှင် ဂုဏ်ပကာသနလုပ်ကာ အများအထင်ကြီးဖို့ သက်သက်အတွက် ရွှေမှုန်လေးများ ကြဲထားသော စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ဝယ်ယူ စားသောက်မည့်သူထဲတွင် ပါဝင်သူများ ဖြစ်လေမည်လားဟု မေးကြည့်ချင်ပါသည်။ :)
Source from : http://theourworld.com/amazing-ways-to-enjoy-eating-gold/
Spooky( Golden foods and drinks)
25 Responses to “ရွှေမှုန်စားကြသူများ..”
အဲဒီ ပိုက်ဆံတွေကိုအာဖရိက အီသီယိုပီယားနဲ့ ရေဘေးလေဘေး သင့်တွေကို လှူလိုက်ရလျှင်ဖြင့်.........
ဟုတ်တယ် ဂျပန်မှာ ဆူရှီအပြင် ထမင်းဆုတ် (အိုနီးဂိရိ)တို့( အူဒွန်) ခေါက်ဆွဲပြုတ် တို့ထဲမှာ လည်း ထည့်စားတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ သူတို့ပြောတာ တော့ ဂုဏ်လုပ်တဲ့ ဖက်ရှင်တစ်မျိုးလို့ဆိုတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ငယ်ငယ်က အဖွားသောက်တဲ့ ရွှေပါတဲ့ သွေးဆေးသောက်ဘူးခဲ့တယ်။ ကြီးမှ သိရတာက ရွှေက ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ အစာကြေသလို မဖြစ်သွားပေမယ့် မလိုတဲ့ အညစ်အကြေး အချို့ကို ပြန်ထုတ်သွားနိုင်တဲ့ တွင်းထွက်သတ္တုဓါတ်တော့ ရှိတယ်တဲ့ ။ ဘာပဲပြောပြော ချော တင်ပေးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတော့ အကုန် စားကြည့်သောက်ကြည့်ချင်လာတယ်နော်။
ဂုဏ်လုပ်ချင်တာတော့ ဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံ လည်း မကြွယ်ဝပါဘူး။ လှလို့စားကြည့်ချင်တာပါ။
သင်သာဆိုလျှင်တော့ ဆိုတော့... ကျွန်တော်သာ ဆိုလျှင်တော့ စားရဲဘူးဗျ။ အဲဒီ ရွှေ တွေပါနေတယ်တဲ့ အသိကြီးကိုက အဲဒီအစားအစာတွေကို မစားရဲသလိုဖြစ်နေတာ။ ကြည့်ရတာတော့ မက်မော လောက်စရာအစားအစာ တွေပဲနော် :) တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲလို ပကာသန တွေကို မက်မက်မောမော ဝယ်မစားပဲ ၊ တက်နိုင်သလောက်ကို လိုအပ်တဲ့သူတွေကို ပဲ ပေးလှူချင်တယ်လို့ ပဲ စိတ်ထဲရှိတာ လေးကို ပြောကြည့်တာ ပါ။
ကျွန်တော်တို့လည်း ရွှေတွေပဲပေါ့... :D..
အမ် ဟီး ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရွှေဆေးဆိုလား အဲဒါတော့ စားဖူးတယ်။ နှလုံးရောဂါအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့။
ဆွေလေးက တော့ အစားအသောက်ဆို အရသာကောင်းဖို့နဲ့ သန့်ဖို့ပဲ ဦးစားပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ပုံလေးတွေတော့ ချစ်စရာလေး။
ဟိုနေ့က မွေးနေ့ကိတ်မှာ ရွှေမှုန်ဖတ် သေးသေးလေးပါလို့ ဘာကြီးလဲ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးမိသေးတယ်
သူတို့က စားလို့ရတယ်တဲ့ .. ကိုယ်က မယုံလို့ မစားဘူး .. သိမှ မသိပဲ :D
ပြောရရင်တော့ မစားကြည့်ချင်ဘူး .. စားစရာလို့ မထင်လို့ .. အမှိုက်တက်ကပ်နေသလိုပဲ ထင်နေတယ် .. :D
In those days,Burmese princesses put on real gold nailed thanakha at Mandalay palace.If you need to take harbal and traditional gold edded medicine........it's ok.............. or else...:(...I won't do it for"pakar thana"
I am interested to eat all of them if they are free of charge, lol!!! Thank you Chaw again for sharing.
မချော မေးထားတော့လည်း ဖြေကြည့်တာပေါ့၊
စားချင်ပါဘူး မချောရယ် ...
ရွှေရောင်လေးက လှတော့ အစားအစာတွေကလှနေမှာပဲ။
မျက်နှာရွှေသွင်းတာလောက်ပဲ ကြားဖူးတာ အထူးအဆန်းသိရတာ ကျေးဇူး။
စကားမစပ် ... ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ ;)
ချော ကတော့စိတ်ကောင်းရှိလို့ နဲ့ တူပါရဲ့ ချောပြီးရင်း
အမရေ ရွှေစားရင်တော့ နှလုံးရောဂါကောင်းတယ် ပြောတယ်. . . အဲလောက်တော့ မဖြုန်းနိုင်ဘူး :D
ဒေါ်လာ ၃၀ တန်တဲ့ ဂျပန်ဆာကေးလေး တော့ သောက်ချင်သား မရောင်းတော့တဲ့ ရွှေယို လေးလည်း စားချင်တယ်
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ ရွှေစားရင် အသားလှတယ်လို့တော့ ပြောကြတယ်။
အင်း...ဒီမှလာလဲရှထိတယ် ... သုံးတာလား ဖြုန်းတာလားးး မသိတော့ပါဘူး .. ပိုနေလျှံနေကြတယ် ဆိုတော့လည်း အကျိုးသင့်တွေ အြောင်းသင့်တွေ .. ဘယ်မှာသုံးသင့်တယ်တွေ ဘယ်တွေးတော့မလဲလေ...
အင်း... ဒီမှာလဲ ရှိတယ် ။။ သုံးတာလား ဖြုန်းတာလား မသိတော့ပါဘူး...
ပိုနေလျှံနေကြတယ်ဆိုတော့ အကျိုးသင့်လား အကြောင်းသင့်လား ဘယ်မှာသုံးသင့်သလဲတွေ ဘယ်တွေးတော့မလဲလေ...
ငယ်ငယ်ကမောမောတတ်လို့ အဘွားကဘုရားကရွှေပြားလေးတွေဝယ်ဝယ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုဆီလေးနဲ့လူးလူးပေးတတ်တယ်
ရွှေတဲ့လား...ဟုတ်ကဲ့ စားဖို့အသာထား ၀တ်ဖို့တောင် အသည်းအသန်ရှာကြရတဲ့ ပစ္စည်းလေ...ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းစရာဘယ်လောက်ပဲများများ ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ လောက်တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေကိုစားပြီးတော့ မဖြုန်းဘူးဗျာ...လူပဲ လှစရာမလိုပါဘူး...ဖိုးလမင်းလည်း သူ့အဆင်းနဲ့ အချင်းနဲ့ပေါ့ မီးတိုင်ငယ်လည်း သူ့အရွယ်နဲ့ အစွယ်နဲ့လေ...ရုပ်နဲ့လုပ်စားစရာမလိုတော့ ရုပ်က်ိုပြင်စရာမလိုတာ ၀မ်းသာလိုက်တာနော်...
အရသာ သိရအောင် နဲနဲလောက်တော့ စားကြည့်ချင်တယ်၊ ဒိထက်တော့ မပိုပါဘူးဗျာ...။း)
ရွှေကို နွားနို့ နဲ့ စိမ်သောက်ရင်တော့ အသားအရေ လှတယ်လို့ ရောဂါရတယ်ပြောတယ်... ကျွန်တော်တို့ တော့ ရောဂါရတယ်ဆိုလို့ မစမ်းရဲပေါင်
ဒါပေမယ့် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိခွင့်ရတဲ့ အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်တယ် မချော...
ရွှေဆိုတာလည်း Heavy Metal တစ်ခုပါပဲ၊ limited အဆိပ်ပါ
အဲလိုကြီးတော့ မစားရဲဘူး မချောရယ်..
အဲဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတာတွေကို စားကြ သောက်ကြတယ်ပဲထားပါတော့.. ဗိုက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားနိုင်မှာမို့လို့လဲ...။
အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို လှူလိုက်တာမှ ကုသိုလ်ရအုံးမယ်...။
မိုးယံနဲ့ ဦးဆိုးဆီပြောတာကို ထောက်ခံသွားပါတယ်...။